Ezokwelapha - iPandawill Technology Co., Ltd
Awukho umkhakha wemboni lapho ukusebenza kwebhodi lesifunda nekhwalithi kubaluleke kakhulu.
AmaPandawill Circuits kanye nozakwethu esikhiqiza nabo banokuqonda okuyisisekelo kwamazinga nokulindelwa kwekhwalithi okudingeka emkhakheni wezokwelapha futhi siqinisekisa ukusebenza nobuqotho bamabhodi esiwakhiqizayo futhi esiwanikezayo.
AmaPandawill Circuits anikela ngobubanzi obugcwele bokuqedwa okungathengiswa (kufaka phakathi i-HASL esekwe emhlanganweni eyamukelekayo ngezicelo ezibucayi zezempilo nezempilo) nazo zonke izinto zokwenziwa ngokhuni (kufaka phakathi abakhiqizi abaphakanyisiwe uma kudingeka).
Ukubaluleka kokulandeleka kwamabhodi wesekethe yezokwelapha kubaluleke kakhulu futhi siyakwazi ukunikeza umkhondo wokucwaningwa kwamanani esezingeni eliphezulu nokukhiqiza kuwo wonke amabhodi ahlinzekiwe, kufaka phakathi izigaba ezinqamulelayo, amasampula wokuthengisa kanye nezigaba zokuhlola ezibonisa ukumelana ne-delamination ngesikhathi senqubo yokuhlangana.
Amabhodi ethu wesifunda asetshenziswa kabanzi emhlabeni wonke kuzicelo zezokwelapha futhi iPandawill iqinisekisa ukuthi wonke amabhodi anikezwe yikhwalithi engcono kakhulu futhi yakhelwe / yenziwa ukuze inikeze amazinga aphezulu kakhulu wokusebenza nokwethembeka.